Talyaaniga: Magangalyo-doon Soomaali ah oo noqday burcad-badeed la raadinayay – Kasmo Newspaper
Talyaaniga: Magangalyo-doon Soomaali ah oo noqday burcad-badeed la raadinayay
Updated - August 12, 2017 10:39 pm GMT
London (Kasmo),Ciidanka Talyaaniga ee loo yaqaanno “Carabinieri” oo kaashanaya Waaxda Dambi-baarista Guud & hawlgallada Gaarka ah “DIGOS” ayaa saacadihii la soo dhaafay xabsiga u taxaabay wiil Soomaali ah oo 24 jir ah.
Maxamed Faarax oo magangalyo-doon isaga diiwaangaliyay xero qaxooti oo ku taalla magaalada Caltanissetta ee Jasiiradda Sicily waxaa loo haystaa in uu ka mid ahaa burcad-badeeddii 2011kii ku qafaalatay Gacanka Persia, Markab shidaal oo Talyaaniga laga lahaa.
Faarax waxaa lagu aqoonsaday raadadkii farihiisa, markii codsigiisa la diiwaan galinayay, oo la barbardhigay kuwii laga soo qaaday markabkii “Savina Caylyn” (Sawirka), bishii Jenaayo 2012kii.
Ruqsadda qabashadiisa waxaa lagu fuliyay amar ka soo baxay Xeer-ilaalinta Degmada Rome, baaristana waxaa lagu ogaaday in Faarax uu ka mid ahaa 50 burcad-badeed ah oo 8dii Febraayo 2011kii markabkaas qafaalatay.
Kaas oo markii ay haysteen in ka badan 10 bilood, ilaa 21kii Disembar, wadaxaajood dheer ka dib, lagu sii daayay markabkii iyo shaqaalihiisa oo ka koobnaa 5 Talyaani ah iyo 17 Hindi ah.
Markabka iyo shaqaalihiisa ayaa la sheegay in lagu soo furtay lacag gaaraysa $ 11,5 Malyuun oo Dollar oo la siiyay burcad-badeedda Soomaalida.
Cadadka lacagta madaxfurashada ah ee laga dhiibay afduub socday in ka badan 10 bilood waxaa waagaas laga maqlay ilowareedyo Soomaalida ah, laakiin Shirkaddii Markabka lahayd lagama xaqiijin.